प्रचण्ड जी ! १० वर्षे जनयुद्ध कि धनयुद्ध गर्नुभयो ? « Media for all across the globe
राजाको छोरा राजा नै बन्ने परम्परा तोडिनुपर्छ । जनताको छोराले देशको बागडोर सम्हाल्नुपर्छ भन्दै १० वर्ष जनयुद्धमा भोगेका पिडा तपाई बाहेक अरु कसलाई थाहा होला र ? अरुलाई सोध्न पनि मिल्दैन । किन कि जनयुद्धका मुख्य कमाण्डर नाईके तपाई नै हो र हुनुहुन्थ्यो ।
प्रचण्ड जी जनयुद्धमा आम सोझा साझा बाँडेको सपना पुरा भयो त ? के ति जनतालाई बाँडेका सपनाहरु आफु कसरि सत्तामा पुग्ने वा फहर्याउने हतियारको रुपमा मात्र थियो की ? सारशंमा भन्दा तपाईले नेतृत्व गर्नुभएको त्यो जनयुद्ध नभई धनयुद्ध थियो की ? १७ हजारको बलिदानीले तपाईले आफ्नो सत्ता, शक्ति, पैसा र परिवारवादको लागि मात्र चाहेको देखिन्छ ।
हिजो २१औं शताव्दीको समाजवाद र सर्वाहारा वर्गको उन्मुक्ति भन्दै जनयुद्धको नाममा धनयुद्ध गरी आफु र आफन्तलाई अर्बपति बनाउने, देशको सत्तामा अस्थिरता ल्याउने, कहिले कांग्रेससँग त कहिले तत्कालिन केपी ओली सरकारको ९ महिले कार्यकालमा तपाईले देखाउनुभएको विगतको व्यवहार त अब नेपाली जनताले भुल्ने छैनन् र त्यसको हिसाव किताव पनि समय क्रममा दिने नै छन् ।
विगतको इतिहासको घाउलाई कोट्याउँदै वर्तमान समयमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको शक्ति संघर्ष पदको लागि हैन भन्दा आम नेपालीले पत्याउनुपर्ने ? अध्यक्ष कमरेड ! अब झुट र आश्वासनको दिन गए । आम नेपाली जनताले बुझेका छन्, तपाईको राजनीतिक खेल कस्तो हुन्छ ? र त्यसलाई कसरी निस्तेज बनाउनुपर्छ भनेर । लोकतन्त्रीक गणतन्त्रमा जनता नै सर्वशक्तिमान हुन्, निर्णायक शक्ति हुन् । जनतालाई आखाँमा कसिङ्गर लगाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ती गर्छुभन्ने सपना नबुनेकै उत्तम हुन्छ ।
पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड ६०औं दशक अघि गाउँका अशिक्षित युवाहरुको महान् नेता थिए । यसमा दुई मत छैन । तर वर्तमान समयमा देशका आम युवाहरु शिक्षित भइसके । शिक्षाको अन्धकारको युगबाट क्रमिक रुपमा उज्यालो युग तर्फ अघि बढिरहेका छन् । त्यसैले तपाईको नियत, नीति सवै नेपालीले बुझिसके ।
अब तपाईसँग अर्को पार्टी बनाउँछु र देशको बागडोर सम्हाल्छु भन्ने हिम्मत पनि छैन । र सैद्धान्तिक रुपमा जनताको बहुदलीय जनवाद बोकेको पार्टीलाई कब्जा गर्छु भनि सोच्नु त त्यो तपाईको दिवा सपना मात्र हो । तपाईको रणनीति आम कार्यकर्ताले बुझिसकेका छन् ।
माओवादी हुँदा कहिले बाबुरामसँग मिलेर बैद्यलाई पेल्ने त कहिले विप्लवलाई । हलिे पनि नेकपा भित्र तपाईले त्यही अस्त्र प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग असहमत भएकालाई लिएर असन्तुष्टहरुको मात्र गुट बनाउने र प्रयोग गरी नेकपालाई भस्म बनाउने कार्य कदापी स्वीकार्य छैन । ओलीसँग असन्तुष्टहरुको ढाडमा टेकी ओलीलाई प्रहार गरी आफु सर्वसत्तामान हुने जुन रणनीति लिनुभयो त्यो रणनीति निरर्थक हुनेछन्, भइसकेका छन्, कार्यकारी अध्यक्ष ज्यू ।
अन्त्यमा, कमरेड प्रचण्ड जी संविधान जारी हुँदा त तपाईले नै भन्नुभएको थियो कि ‘साईकल चढ्छु भारतको सामु भुक्दिन ।’ तर अहिलेको तपाईको व्यवहार र त्यो समयमा गर्नुभएको प्रतिवद्धता हेर्नुस् । कति चाँडो भुल्नुभयो त्यो आफ्नो प्रतिवद्धता ? तपाईलाई हामी जस्ता कार्यकताले राजनेताको रुपमा हेर्न चाहन्छौं । तपाई पद, पैसा, शत्ती, परिवारवादको अस्थिरता तथा प्रतिपक्षीको लोभ मोह त्योग्नुपर्छ । त्यस्तै भारतको एजेण्डा त्यागेर नेकपाको एजेण्डा बोकी चाँडो भन्दा चाँडो महाधिवेशन गराएर पार्टी र संगठनलाई अझ मजबुद बनाउनुस् । त्सपछि तपाईलाई देश र जनताले सदैव सम्झिरहनेछन् ।